Laba siyaabood oo nidaameed Muuqaalka Iyadoo iCloud Si fudud
iCloud Talo & Tricks
1 dayactir Arrimaha caadiga ah iCloud
1.1 noqnoqda iCloud calaamad-in codsi
1.2 ammaanka iCloud soo saartaa 10
1.3 iCloud Kaydinta
1.4 Maamul idevices badan oo leh hal ID Apple
1.5 arrimaha hagaagsan Common iCloud
Qufulka 1.6 Bypasss iCloud
2.2 Setup iCloud Document
2.4 nidaameed aragti la iCloud
3 kaabta & Soo Celinta la iCloud
3.1 Setup iCloud kaabta
3.3 Download iCloud kaabta
3.4 kaabta iPad in iCloud
3.5 iPhone kaabta in iCloud
3.6 Soo Celinta ka kaabta iCloud
3.8 kaabta iPhone Notes
3.9 kaabta iPhone Photos
4.2 ka iCloud saar Device
4.3 Dib-u-download Songs ka iCloud
4.4 Apps ka iCloud Delete
4.5 Lugood iyo iCloud hayaan
Marka aad isticmaalaysid qalabka Apple ah, waxaad u baahan kartaa in aad u hagaagsan aragti aad iCloud iyo tan kuu ogolaaneysaa in aad sii updated on go ah, waqtiga oo dhan. Waa hab aad u sahlan in ay si wadajir ah loo dardar macluumaad badan oo muhiim ah oo ku saabsan qalabka kala duwan Apple.
Marka aad qabtid qalabka kala duwan la xiriiro kala duwan, emails iyo aad u badan, doorashada si hagaagsan aad aragti iyadoo la kaashanayo iCloud muuqato in ay tahay wax wanaagsan in la sameeyo.
Odoroska nidaameed iyo iCloud si toos ah iCloud.com
Apple aad bixisaa xal kuwaas oo kaa caawin doona si toos ah aad u hagaagsan faahfaahinta iCloud iyo aragti ku server iCloud ah. Ka dib waa tallaabooyinka kaas oo aad u baahan tahay in la raaco.
• Marka hore, waxaad u baahan tahay inaad kala soo baxdo gacanta guddi iCloud ee aad kombuutarka.
• Hadda ordi codsigan.
• Waxaa lagu keentay in doonaa inaad geli id ​​iCloud iyo password.
• isla login guddiga gala.
• In daaqaddii aad ka heli doontaa, guji xiriirada, jadwalka iyo hawlaha la saadaasha.
• Hadda, guji "codsan 'ka dibna sug in muddo ah.
• Marka edbinta la fuliyo, waxaad ka heli doontaa in faahfaahinta xiriirada aragti aad, jadwalka iyo xitaa hawlaha noqon doonaa heli karo iCloud Id.
• Hadda, dib si aad u iPhone tago oo guji goobaha.
• dhaqaaq iCloud ka dibna saxiixa in adiga oo isticmaaleya isticmaale aqoonsiga iCloud.
• Hadda, shid xiriirada iyo kalandar aawadood syncing aad iPhone faahfaahinta saadaasha.
Dheeraad ah, waxa kale oo aad u baahan tahay si aad u hubiso in iCloud ah aragti add-in rogman yahay ee barnaamijka saadaasha aad. Tallaabooyinkan waxay u baahan tahay in la raaco.
Talaabooyinka ay tahay in loo Odoroska 2010 iyo ka dib
• Fur menu faylka
• Hubi 'doorasho' in guddi ka tagay
• In uu suuqa kala aragti doorasho taas oo kor u soo booda, guji "dar-tago 'oo la joogo in guddi bidix noqon doonaa.
• Hadda, waxaad ka heli doontaa liiska kala duwan add-tago
• Dooro iCloud ah aragti add-in ka mid ah liiska
Talaabooyinka ay tahay in loo Odoroska 2007
• Tag qaybta qalabka iyo dooro rugta trust
• Laga soo bilaabo safka bidix, dooro ikhtiyaarka ah, 'dar-tago'
• Eeg in codsiga firfircoon dar-tago qaybta dooro 'aragti iCloud dari ee'
Kuwani waa tallaabooyinka kaas oo aad u baahan tahay in la raaco. Haddii aadan diyaar u yihiin in ay dhex maraan oo dhan mashaakil kuwaas oo aad raadinayso xal fudud, waxaad dooran kartaa Wonder share TunesGo Retro.
Wondershare TunesGo Retro - waxa ay qabato?
Wondershare TunesGo bixiyaa hab badan handier si hagaagsan aragti la iCloud. Haddii aad raadinayso tallaabooyinka ugu sareysa taas oo loo isticmaali karaa aawadood howlan faahfaahin iCloud iyo aragti aad, halkan waa tallaabooyinka ugu muhiimsan oo aad u baahan tahay si ay u hirgeliyaan.
• Ku rakib Wondershare TunesGo Retro aad mashiinka iyo waxa maamula.
• Qaado telefoonka iyo xerto your computer iyadoo la isticmaalayo cable USB ah.
• Marka aad iPhone xiran yahay, codsiga lagu ogaan doonaa telefoonka oo lagu soo bandhigi doonaa suuqa kala codsiga.
• Dhinaca bidix, waxaad yeelan doontaa doorasho lagu magacaabo 'xidhiidh'.
• In this category, Midkaad doonaysid dooro, xiriirada ka xasuusta telefoonka ama waxaad dooran kartaa xisaabta sida iCloud ah.
• Ka dibna waxaad ka heli doontaa suuqa kala maamulka xiriir ah.
• Hadda dooro oo dhan xiriirada ka dibna riix 'Import / Dhoofinta'
• In hoos u soo dhaadhacay liiska, dooran 'dhoofinta Xiriirada soo xulay'.
• Haddii aad dooratay oo dhan xiriirada inay u dhoofiyaan, waxaad dooran kartaa 'dhoofin oo dhan xiriirada'
• Hadda dooro 'in Outlook Express ama si aragti 2003/2007/2010/2013' wax kasta oo ay dhacdo waxaa laga yaabaa.
• Si aad u hagaagsan aad aragti leh qalab Apple, waa in aad guji 'Import / Dhoofinta'.
• Ka dibna, guji "contacts dejinta kombiyuutar '.
• Under Doorashadan, guji Xagga aragtida muujiyaan 'oo aad la samayn doonaa.
• Sidoo kale, waxaad dooran kartaa sawiro, playlist iyo warbaahinta oo raac habka la mid ah sidoo kale.
Tani waa sida ugu fudud ee aad syncing aragti iyo iCloud iyo ilaalinta waafaqsan macluumaadka. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira qaababka kale oo Wondershare TunesGo Retro leeyahay in ay bixiyaan sidoo kale.
Waxaa muhiimad ahaan waa tababare qalab Apple oo ku yimaadda buuxaan qaababka aad u tiro badan. Halkan, waxaan qaadi doonaa eegno qaar ka mid ah.
• Waxaad ku wareejin kartaa heeso, videos, iyo xitaa playlists aad.
• Marka taa laga reebo, ayaad u habayn kartaa xiriirada aad iyo xitaa nuqul sawirada iyo wax badan oo dheeraad ah ku sameeyo.
• Waxay kaa caawinaysaa in howlan warbaahinta u dhexeeya qalabka kala duwan Apple oo iyaga iyo sidoo hayo ilaa taariikhda.
• Waxaad ku milmaan karo xiriirada nuqul ku saabsan qalabka Apple sidoo.
• Waxay leedahay fudud ah si ay u isticmaalaan interface oo uma baahna tilmaamo gaar ah.
Sida loo isticmaalo iCloud
Sida loo soo celiya macruufka la kaabta iCloud
Sida loo Unlock iPhone habayn
Talo & Tricks in ay tirtirto files on iPhone
Sida loo soo ceshano Xogta laga iCloud
Afar siyaabo fudud si ay u helaan sawiro iCloud
Sidee ay u arkaan iyo soo celinta fariimaha qoraalka ah ka iCloud
Sida loo Mudanayaasha iyo isticmaali iCloud Photo Sharing.
Sida loo Dib-u-download Songs iyo Delete rabin Songs ka iCloud on iPhone
Talooyin Center: Sida loo Isticmaalo iCloud, kaabta iCloud iyo iCloud Kaydinta
Sida loo kaabta iCloud Xiriirada in kombuutarka
> Resource > iCloud > laba siyaabood oo nidaameed Muuqaalka Iyadoo iCloud Si fudud